Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Mmiri mmiri mgbochi mmiri nke Uganda: iru njem nlegharị anya ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Kọmịshọna njem nlegharị anya nke Uganda (UTB) ejirila mpaghara ike mee ihe ugboro ugboro iji kwalite ngwaahịa njem nlegharị anya nke Uganda gafere njem nlegharị anya sitere na anụ ọhịa site na mbinye aka nke Memorandum of Understanding (MOU) na Uganda Electricity Generation Company Limited (UEGCL). iji zụọ ahịa 600MW Karuma Hydro Power Dam na 183MW Isimba Hydro Power Dams dị ka ngwaahịa njem nlegharị anya akụrụngwa.
UTB bụ inyere UEGL aka ịkwakọ na ịzụ ahịa ụdị ọrụ na atụmatụ dị iche iche ezubere na ọdọ mmiri ike.
Ihe omume ndị njem na ngwaahịa a ga -etinye gụnyere njegharị osisi, njem ụgbọ mmiri, ịkụ azụ egwuregwu, ụlọ ọbịa, na ihe ncheta.
MOU bịanyere aka na Septemba 7, 2021, n'Isimba Dam na -akwado mbanye UEGCL iji jiri akụ ya mee ihe n'ịgbasa Pọtụfoliyo azụmaahịa ya ma kwalite nkwado ya dị ka nchegbu na -arịwanye elu.
“MOU a bụ mmalite njem dị mkpa maka Uganda. Mgbe ada ka fruition, ihe ịga nke ọma mmepe nke Karuma Hydro Power Project na Isimba Hydro Power Project n'ime saịtị njem nlegharị anya ga -abawanye Pọtụfoliyo njem nlegharị anya anyị, yabụ, na -atụnye ụtụ na ebumnuche anyị bụ, na -abawanye olu (ọnụọgụ) na uru (nrite) nke ndị njem na Uganda na mgbatị, ezinụlọ Uganda na ibi ndụ site na imepụta ọrụ na ịbawanye ego ụtụ isi, "Lilly Ajarova, onye isi oche ndị nlegharị anya na Uganda kwuru na mbinye aka ahụ. O kelere njikwa UEGCL maka inwe mmasị na njem nlegharị anya yana maka iru UTB ka ọ bụrụ njikọta na-agbakwunye uru.
“Ọdịiche na nkwalite ngwaahịa ndị njem gafere njem nlegharị anya anụ ọhịa ịgụnye n'etiti ndị ọzọ, okpukperechi, ọdịnala, nri (nri) na ugbu a njem nlegharị anya akụrụngwa, dị anyị ezigbo mkpa dị ka ngalaba yana n'ezie dị ka UTB. Ọ bụ ya mere, na atụmatụ atụmatụ anyị 2020/21-2024/25, UTB ebidola imekọ ihe ọnụ na ndị nwe saịtị njem, ngalaba nkeonwe yana ngalaba na ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji zụlite ma chịkọta ngwaahịa njem dị iche iche iji mee ka ogologo oge ọnụnọ ebe a dị. , si otú a na -abawanye ego njem njem, ”Ajarova kwuru, ọkachasị maka ahịa ụlọ.
Dọkịnta Eng. Harrison Mutikanga, na -ekwuchitere UEGCL, kwuru na MOU kwekọrọ na atụmatụ atụmatụ afọ ise nke UEGCL (2018 -2023) na n'etiti ndị ọzọ, gbadoro anya na ebumnuche bụ isi nke ịkwalite Pọtụfoliyo azụmahịa ya.
Ọ tụrụ anya na itinye nnukwu akụ mmiri ọkụ dị ka ngwaahịa njem ga -enyere aka nke ukwuu n'ịkpọghe akụrụngwa. Ohere inweta njem na Uganda. Emere nke a n'eziokwu na ụlọ ọrụ ike mmiri nwere ihe pụrụ iche ma n'elu ma n'okpuru ala. Mutikanga kwuru, "Dịka UEGCL, anyị na -ekwe nkwa itinye aka na mmekorita a."
Njem nlegharị anya na saịtị ike ọkụ abụghị ihe ọhụrụ n'ihi na egosiri nke a na saịtị Gorges atọ na China, saịtị Livingstone na Zambia, na saịtị Niagara Falls na Canada.
Agbanyeghị, mmekọrịta dị n'etiti ngalaba abụọ ahụ adịchaghị mma maka afọ iri mbụ nke narị afọ nke 21, mgbe gọọmentị Uganda malitere ime ihe ike iji bulie ike mmiri na ike nke mba ahụ na -esote ụkọ. ulo oru na onu ogugu ndi mmadu. Nke a bịara ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem nlegharị anya dị oke ọnụ ebe ọ bụ na a na-achụ ebe ndị ama ama na osimiri Naịja ama ama na rafting na kayaking nke ụwa n'aha mmepe.
Ka ọ na -erule afọ 2007, ụlọ akụ mba ụwa akwadola ọrụ Bujagali Hydropower, na -eme ka ọdịda nke mbụ nke klas 5 rapids na Bujagali daa wee chụpụ Oracle nke Falls, Nabamba Budhagali.
Emepụtara mpaghara Kalagala Offset, n'etiti International Development Association (World Bank) na gọọmentị Uganda. Emere nkwekọrịta a iji belata mbibi mmiri Bujagali kpatara ma kwuo na ọrụ mmiri ọzọ agaghị ejupụta ebe ewepụtara. Agbanyeghị, na 2013 gọọmentị nwetara ego ọzọ site na Exim Bank of China iji wuchaa ọrụ mgbochi mmiri dị nde $ 570, na -emebi nkwekọrịta ahụ.
N'eziokwu, ike ọkụ dị oke mkpa maka mmepe na nrụpụta obodo nke obodo a, n'agbanyeghị na ọnụ ahịa ya na cents 0.191 n'otu nkeji ka dị n'okpuru iru ime obodo Uganda, na -eburu n'uche na ebufere ibu na ezinụlọ. Ihe na -emesi ọha mmadụ obi ike bụ na àkwà mmiri Isimba, nke a rụrụ n'ihi mmiri mgbochi mmiri, emeela ka ọ dị mfe ime njem n'etiti mpaghara Kayunga na Kamuli, dochie ụgbọ mmiri a na -apụghị ịdabere na ya na ịkwalite azụmaahịa na njem.
N'okpuru ala, ọdọ mmiri Isimba ọhụrụ a họpụtara na Naịl ka na-ewu ewu maka rafting mmiri ọcha na asọmpi klaasị ụwa gụnyere Nile Freestyle Festival nke na-adọta ndị otu kayak si USA, Russia, na South America yana Europe, ọtụtụ n'ime ha azụgoro ọzụzụ. na Naịl na nkwadebe maka asọmpi rafting mmiri ọcha nke ụwa.
Onye isi oche bọọdụ UTB Honorable Daudi Migereko, onye ihe na-atọ ụtọ bụ onye minista ike n'ogo mmachi mmachi na 2006, kwuru na mbinye aka ahụ na MOU bụ akụkụ nke atụmatụ imekọ ihe ọnụ nke UTB na ndị isi ọha, nkeonwe, na ụlọ ọrụ na-abụghị uru. ọrụ nwere mmetụta kpọmkwem na njem.
N’afọ 2019, gọọmentị weghachiri atụmatụ ịkwado ọmụmụ ihe ga-ekwe omume maka iwu ọdọ mmiri 360 megawatt na Murchison Falls National Park site na M/S Bonang Energy and Power Ltd. site na Republic of South Africa na Norconsult na JSC Institute Hydro Project, naanị ijigide nrụgide site na Association of Uganda Tour Operators (AUTO) na Civil Society.
A na -atụ anya na mgbagha ndọrọndọrọ ọchịchị nke UTB na mpaghara ike ga -akwụ ụgwọ, mgbagha dị jụụ ga -arapara; nzọ akwụkwọ akụkọ na -ekwu ihe ọzọ.
Ọdụ ụgbọ elu San Diego na-eme 100% ...